उद्यमशीलता र आर्थिक विकास | Hamro Patro
उद्यमशीलता र आर्थिक विकास
Bishwa Raj Adhikari - May 31 2018
सानै उमेरदेखि उद्यमीले सामाजिक वातावरण पाएको हुनाले युवाहरूमा पनि केही नयाँ काम (व्यापार) गरौ भन्ने सोचको विकास भएको हुन्छ। नयाँ सोच सहित नयाँ किसिमको कार्य गर्न प्रेरित भएका हुन्छन्। प्रधान कार्यालय स्वीडेनमा रहेर संसारभरि नै फैलिएको संसारकै सर्वाधिक ठूलो खुद्रा फर्निचर भण्डारका संस्थापक इन्गाभार काम्प्राडले सन १९४३ मा यस खुद्रा भण्डारको स्थापना गर्दा उनको उमेर केवल १७ वर्ष थियो।
उद्यम र व्यापार फरक–फरक कार्य हो। तर हामीले परम्परागतरूपमा यी दुवै कार्य समान हो भन्ने किसिमले बुझ्छौं। अन्तर खोज्ने प्रयास गरेनौं। किन होला?
उद्यम भनेको नितान्त नौलो सोच सहितको नौलो किसिमको व्यापार गर्नु हो। परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापारको अनुकरण नगरेर नयाँ किसिमको व्यापार गर्नु र ग्राहकहरूलाई त्यस किसिमको व्यापारमा आबद्ध गराउनु हो। त्यसकारण उद्यमीहरूले नयाँनयाँ किसिमका व्यापारको खोजी गर्दछन् र त्यो नयाँ व्यापारमा संलग्न हुन सामान्य नागरिकलाई प्रेरित गर्दछन्। फेसबूक, माइक्रोसफ्ट, गुगल, उबर, भाइबर, एपल, एमेजन आदि उद्यम हुन्, व्यापार होइन। यी नितान्त नौला व्यापार हुन्। पहिले नगरिएका वणिक कार्य हुन्।
उद्यमहरूले समाजलाई गति दिन्छन्। थप रोजगार दिन्छन्। थप आय सृजना गर्छन्। व्यापारीहरूले बढी मुनाफा गर्न पाउँछन् भने उपभोक्ताहरूले नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाउँछन्। यस भनाइको प्रत्यक्ष उदाहरण हो फेसबूक। सन् २०१८ को पहिलो त्रैमासिकसम्म फेसबूक मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २.१९ बिलियन रहेको देखिएको थियो। फेसबूक नितान्त नौलो सोचसहित आएको थियो र उसले व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्यो पनि। सन् २०१७ मा फेसबूकको आय ४० हजार ६ सय ५३ मिलियन डलर थियो। उसले सोही अवधिमा १५ हजार ९ सय ३४ मिलियन खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो। अहिले २५ हजार १ सय ५ कर्मचारी फेसबूकमा काम गर्छन्।
व्यापार भनेको परम्परागतरूपमा चलिआएका वाणिज्य कार्यहरूको अनुपालन वा अनुसरण गर्नु हो। नयाँ वाणिज्य सोच ल्याउनुहोइन। कसेलै कुनै किसिमको होटल खोल्छ, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्छ, कलेज सञ्चालन गर्छ, यातातात सेवा प्रदान गरेर मुनाफा प्राप्त गर्दछ भने त्यो व्यापार हो, उद्यम (Entrepreneurship) होइन। यस किसिमको परम्परागत व्यापार सञ्चालन गर्दा सञ्चालकले आफ्नो रचनात्मक सोचको प्रयोग कुनै किसिमबाट पनि गरेको हुँदैन। केवल कसैले गरेको कार्य को अनुकरण (नक्कल) मात्र गरेको हुन्छ। उसले नयाँ किसिमको सोंच ल्याएर, त्यो सोचको प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको हुँदैन। परम्परागत किसिमको व्यापार गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि किसमको जोखिम उठाउन चाहँदैन। र सजिलो गमन (easy going) चाहन्छ। तर उद्यमीले भने जोखिम वहन गर्दछ। र ‘मुनाफा भनेको जोखिम वहनको पुरस्कार हो’ भन्ने अर्थशास्त्रको परिभाषामा पूर्ण विश्वास गर्दछ।
नेपालमा किन व्यक्तिहरूले उद्यम गर्न मन पराउँदैनन्? अथवा नेपालमा किन उद्यमीहरूको अभाव भएको होला?
यो प्रश्न ज्यादै जटिल र अर्थपूर्ण पनि छ। नेपालमा युवा एवं विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी नतुल्याउनमा सरकार र समाज दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छ। सरकारले उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने किसिमको शिक्षा नीति ल्याउन सकेको छैन। यस विषयमा सरकारले पर्याप्त गृह कार्य पनि गरेको छैन। हाम्रो शिक्षा नीतिले विषयवस्तुको ज्ञान त दिन्छ, तर त्यो ज्ञानलाई व्यावहारिक किसिमले प्रयोग गरेर स्वतःरोजगार सृजना गर्ने किसिमको सोच, आँट र सीप दिंदैन। ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा मात्र विद्यार्थीहरूले औपचारिक अध्ययन समाप्त गरेपछि कुनै व्यापार सञ्चालन गरेको पाइन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू कुनै सङ्गठनमा गएर जागिर खाएको पाइन्छ।
यसैगरी कुनै व्यक्तिले कुनै नयाँ सोच ल्याएर कुनै नयाँ किसिमको कार्य गरेको छ भने उसको त्यो सोच (Intellectual properties) लाई सरकारले बलियो कानूनी संरक्षण दिन नसकेको पनि देखिएको छ। उदाहरणको लागि कुनै गायकले आफ्नो गीतको एउटा एलबम बनाएर ल्यायो र ऊ ज्यादै लोकप्रिय भएर उसको उक्त एलबम ठूलो सङ्ख्यामा बिक्री हुन थालेपछि, अन्य बिक्रेताहरूले सो गायकको स्वीकृतिबिना, चोरी गरेर, उक्त गायकको एलबमको नक्कल गरेर, नक्कल प्रति बिक्री गर्न आरम्भ गर्छनन्। यस्तो अवस्थमा गायकहरू गीतको एलबम बनाउन कसरी प्रोत्साहित हुन सक्छन्? अमेरिकामा हो भने त्यस्तो किसिमले अनुमतिबिना नक्कल गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ र त्यस्तो गर्ने व्यक्ति सजायको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसकारण अमेरिकामा ‘कपी’ गरिएका कुरा खरिद बिक्री हुँदैन। अमेरिकामा कसैको पनि बौद्धिक सम्पत्तिको सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिन्छ।
हामीलाई उद्यमी बन्न नदिन हाम्रो समाज झनै बढी दोषी छ। हरेक व्यक्तिलाई चाहिने, बाँच्नका लागि आधार बनेको आम्दानी (रोजगार) बारे हाम्रो समाजमा कमै कुरा हुन्छ। राजनीतिबारे बढी चर्चा हुन्छ। अनावश्यक चर्चा हुन्छ।
भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा आए, गए पनि। जनकपुरमा अभिनन्दित भए। उनको भ्रमण सकिएको कैयौ दिन भइसक्यो, तर मोदीको भ्रमण कालमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले के भने, केन्द्रीयमन्त्री ईश्वर पोखरेलले के भने, प्रम ओलीले कस्तो लुगा लगाएजस्ता कुराहरू अहिले पनि सञ्चार माध्यमहरूले स्वादिलो पारेर प्रकाशित गरिरहेका छन्। पाठकहरूले पनि स्वाद लिएर, आनन्द मानेर त्यस्ता समाचार पढिरहेका छन्। तर त्यस क्षेत्रका व्यक्तिलाई आम्दानी दिने, रोजगार दिने कुराहरू भइरहेका मात्र छैनन्, त्यस किसिमका विषयहरूले पटक्कै महत्व पाएका छैनन्। यस्तो किन होला?
मोदी–भ्रमणले जनकपुरको अर्थ व्यवस्थामा कुन किसिमको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ त्यसबारे कतै चर्चा परिचर्चा भएको पाइँदैन। मोदी भ्रमण पछि जनकपुर क्षेत्रमा कसरी धार्मिक पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसबारे पनि अध्ययन, अनुसन्धान, चर्चा परिचर्चा भएको पाइँदैन। हाम्रो समाजले चाहिनेभन्दा बढी राजनीति गर्छ। यस्तो किन होला ? यस प्रश्नको उत्तर गम्भीर भएर खोज्न आवश्यक छ।
अमेरिकी एवं युरोपेली समाजले युवाहरूलाई सानै उमेरदेखि उद्यमी हुन उत्प्रेरित गर्दछ। र सरकारले पनि शिक्षा नीतिलाई रोजगार सृजना गर्ने किसिमको पारेको हुन्छ।
माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स केवल १५ वर्षको हुँदा उनले सानोतिनो किसिमको व्यापार गर्न आरम्भ गरिसकेका थिए। उनी २३ वर्षको उमेरमा नै माइक्रोसफ्टको प्रमुख भइसकेका थिए। २३ वर्षको कलिलो उमेरमा लखपति भइसकेका थिए।
फरवरी ४, २००४ मा स्थापना भएको फेसबूकका अविष्कारकर्ता मार्क जुकरबर्गको उमेर (जन्म १९८४) अहिले केवल ३४ वर्ष छ। यो युवा अवस्थमा नै उनले नाम र दाम दुवै कमाइसकेका छन् र साथै संसारलाई एउटा नितान्त नौलो प्रविधि (व्यापारको तरिका) दिन सफल पनि भएका छन्।
यसैगरी लैरी पेजको, जसले सर्जी ब्रिनसँग मिलेर गुगलको स्थापना गरेका थिए, उमेर (जन्म १९७३) अहिले मात्र ४५ वर्ष छ। संसारको नै सर्वाधिक ठूलो अनलाइन खुद्रा बिक्री भण्डार ‘अमेजन’ का संस्थापक, प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसको उमेर (जन्म १९६४) अहिले ५४ वर्ष छ।
नाम र सम्पत्ति कमाउने यी उद्यमीहरूले कम उमेरमा नै अति आम्दानी हुने व्यापारको सृजना गर्न सकेको र आफूले सृजना गरेको व्यापारबाट हजारौंलाई रोजगार दिन सकेको देखिन्छ।
पुरानो प्रसङ्गमा फर्कौं। केवल २३ वर्षको उमेरमा बिल गेट्स माइक्रोसफ्टका प्रमुख भइसकेका थिए। उनले नयाँ किसिमको व्यापार सृजना गरिसकेका थिए। यो उमेरमा हाम्रो समाजमा बहुसङ्ख्यक युवा अभिभावक (बाबुआमा) को खर्चमा पढिरहेका हुन्छन्। आफ्नै खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर हुन सकेका हुँदैनन्। हाम्रो समाजले आत्म निर्भर हुन नै सिकाउँदैन। शिक्षा नीतिले पनि सिकाउँदैन। उमेर पुगेका युवाहरू पनि बाबुआमासँग एउटै बृहत् (Extended) परिवारमा बस्छन्। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व एवं परिवेश बनाउन प्रोत्साहित हुँदैनन्। कतिपय युवा बाबुआमाको सम्पत्तिमा गर्व गरेर, आफू केही काम नगर्ने पनि देखिएको छ। यस किसिमको मनोवृत्तिले कुनै पनि व्यक्तिलाई उद्यमी हुन दिंदैन।
उद्यमी हुन स्वतन्त्र परिवेश, स्वतन्त्र चिन्तन जरुरी छ।
अबको समयमा हामीले देश, समाज र परिवारलाई धनी बनाउन उद्यमीहरूको उत्पादन गर्न जोड दिन आवश्यक छ। देशको समाजिक परिवेश र शिक्षा नीतिलाई पनि उद्यमी उत्पादन गर्ने किसिमको तुल्याउन आवश्क छ।